Paartiin mormituu mormii barattoota Oromoo irratti ibsa ejjannoo qabxii shan qabu baafte.
Ibsa ejjannoo gama bulchoota isaaniitiin kenname “paartiin biyya bulchitu humnaan biyya bulchuutti jiraachuu isaanii dhoffachuuf poropogaandaa oofuun mirga waan fedhan fudhachuu fi waan fedhan jibbuu seera biyyatti keessa jiru duubati hin deebisu.”
Seerii ADWUI, “dogogoraan biyyaan bulchitu ibsa kanaatti ji’a lamaan dabaran Oromiyaatti keessatti hojjachaan ture.”
MEDREK maqaa bulchoota paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo(KFO) seera malee hidhaman jedhanii obboo Beqqelee Garbaa,ka manaa bahuu dhowwame obboo Beqqelee Nagaa, itti aanaa barreessaa KFO obboo Dejenee xaafaa,itti gaafatamtoota Liigii daragggoota KFO Oromoo obboo Destaa Dinqaa,obboo Gurmeessaa Ayyaanoo,obboo Addisuu Bualaallaa,obboo Derejjee Margaa, obboo Alemuu Abdiisaa fi maqaa miilota isaanii hedduu maqaa dhahan.
Jara kanaa fi ummatii karaa nagaatiin mormii dhageessifate seera malee hidhamee jedha gabaasii MEDREK.
Itti aanaan itti gaafatamaa fi itti gaafmataan saqunnamiti MEDREK obboo Xilahun Indeshawu akkana jedhee rakkoo Oromiyaan keessa jirtu VOAtti hime.
“Rakkoon tun dabalaa deemuutit jirti namii hidhamulleen durii dhibba hedduu turee ammaa kuma hedduu tahutti jira rakkon tun dabalaa deemuutit jirti. Ummata karaa nagaatiin gaafi gaafate irratti mootummaan rakkoo akkanaa fiduun seera malee.Maaster pilaaniin mootummaan Finfinnee baase seera qabeessaa miti.”
MEDREK nama hiriia Oromiya irratti lubbu dhabe jedhee teessoo fi maqaa isaanii walti qabachuutti jiraa haga ammaa maqaa nama 90 tahu argate.